Dagaal dhimasho sasabay oo Maanta ka dhacay Muqdisho |
Dagaal dhimasho sasabay oo Maanta ka dhacay Muqdisho
Waxaa maanta Dagaal u dhaxeeyay Ciidamo kawada tirsan Dowlada Federaalka Soomaaliya uu ka dhacay Isgooska Howl-Wadaag ee Magaalada Muqdisho, waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goob jooge ku sugnaa Isgooska Howl-Wadaag ayaa sheegay in ciidamado kawada tirsan Dowlada ay isqabteen uuna halkaasi ku dhax maray dagaal socday ku dhawaad nus saac, waxa uuna dagaalka markii dambe u i istaagay si iskiis ah.
Inta la xaqiijiyay hal qof oo kamid ahaa Ciidamadii dagaalamay ayaa la xaqiijiyay in uu dhintay halka qof kalan uu dhaawacmay, waxaana dagaalkan intii uu socday uu hakad galiyay isku socodka iyo ganacsigii halkaasi ka jiray.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Degmada Howl-Wadaga iyo laamaha amaanka oo ku aadan dagaalkii maanta ka dhacay Isgooska Howl-Wadaag, xaalada goobtii uu dagaalku ka dhacay ayaana hada ah mid dagan oo ganacsigii uu dib usoo laabtay.
Magaalada Muqdisho ayaa xiliyada qaar waxaa ka dhaca iska hor imaad u dhaxeeya Ciidamp kawada tirsan Dowlada Soomaaliya, waxaana dagalaadaasi mararka qaarkood uu qasaaro kasoo gaaraa dad shacab ah.